Ana Lena Rivera. Kubvunzana nemunyori we Chii vakafa vakanyarara | Zvazvino Zvinyorwa
Ana Lena Rivera. Kubvunzana nemunyori weZvinonzi vakafa vakanyarara
Mifananidzo yekuvhara: neruremekedzo rwaAna Lena Rivera.
Ana Lena Rivera vakatanga chiitiko chikuru chekunyora kubva kuhwina iyo Torrente Ballester Mubayiro 2017 neruzivo Izvo vakafa vanonyarara. Zvino pinda mune yakajairwa maelstrom yezvinhu izvi nekutanga kwako uye mharidzo. Muna AL tisu tine rombo rakanaka kuva naye semupepeti. Makanga mune moyo munyoro kutipa iyi hurukuro yakawanda kwaanotiudza zvishoma nezve novhero yake, zvaanoita, maitiro ake ekugadzira, fungidziro dzake uye zvirongwa zvake zvinotevera. Saka Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu uye ndinokushuvirai kubudirira kwese..
2.1 Kuhwina Mubairo weTorrente Ballester neizvo izvo vakafa vakanyarara kwareva kupinda kwako kwakabudirira mupasi rekutsikisa. Zvakanga zvakaita sei kupinda mumakwikwi?
2.2 Pfungwa yekunyora ndeyekuti Chii Vakafa Vakanyarara?
2.3 Ndiani protagonist wako, Gracia San Sebastián, uye ko iwe iwe maari?
2.4 Uye neazvino mhirizhonga yeakanaka echikadzi protagonists, mune chii chingave chinonyanya kumira kupfuura izvo?
2.5 Ndeapi vanyori vaunoyemura? Pane chero mumwe munhu kunyanya akakufurira iwe yenyaya iyi? Kana pamwe kuverenga kwakakosha?
2.6 Izvo vakafa vanoramba vakanyarara ndiko kutanga kwesaga kana iwe unoronga kuchinja rejista mune yako inotevera novel?
2.7 Maitiro ako ekusika kazhinji sei? Wakave uine chero zano kana nhungamiro? Unoikurudzira here?
2.8 Ndeapi mamwe mavara emhando yaunoda?
2.9 Mashoko mashoma kune vanyori vekutanga?
2.10 Uye pakupedzisira, ndeapi mapurojekiti aunazvo iwe kana ese maelstrom ekuratidzira nemasaini apfuura?
Akazvarwa mukati Oviedo Muna 1972, akadzidza Mutemo neBusiness Administration kuI ICADE, kuMadrid. Mushure memakumi maviri emakore semaneja mune yakakura nyika zhinji, akachinja bhizinesi kunyora, rudo rwake rukuru, rwunowirirana nekuzvarwa kwemwanakomana wake, Alejandro. Padivi pake pakazvarwawo Nyasha Musande Sebastianla anotungamira mutsvakurudzi yeakateedzana ezvekufungidzira ayo akatanga neinova rekutanga.
Kunda iyo Torrente Ballester Mubairo ne Izvo vakafa vanonyarara Kwave kuri kupinda kwako kwakabudirira munyika yekutsikisa. Zvakanga zvakaita sei kupinda mumakwikwi?
Chokwadi? Nekusaziva chaiko. Izvo vakafa vanonyarara Ndiyo novel yangu yekutanga, saka pandakapedza kuinyora, ndakanga ndisingazive zvekuita. Ini ndaisaziva chero munhu mubato iri, saka ndakatsvaga pamhepo, ndikaita runyorwa rwevabudisi vakagamuchira zvinyorwa uye ndakafunga kutumira yangu novel nechinangwa chekutora maonero avo. Mwedzi miviri kana mitatu yakapfuura uye ini handina kupihwa mhinduro, saka ndakatanga kuzviisa kumamwe makwikwi. Vashoma, nekuti mune ruzhinji haugone kumirira danho mumumwe makwikwi, saka mwedzi mishoma yakapfuura zvakare uye ini handina kuwana mhinduro Kunyangwe kubvuma.
Pakarepo, pasina chinhu chekuzvizivisa, zvinhu zvakatanga kuitika: Ini ndaive wekupedzisira muFernando Lara Award uye izvo zvaiita sezvisingadaviriki kwandiri. Kwaive kumhanyisa, asi ipapo mwedzi yakati wandei yakapfuura zvakare uye hapana chakaitika futi. Pandakanga ndatotanga kutsvaga zano nyowani, uyejuri reiyo Torrente Ballester Prize yakafunga kuudza nyika: "Hei, verenga izvi, zvakanaka!", uye ndakafunga kuti ndasvika pamusoro pehope dzangu. Asi zvakadaro hazvina kunge zvakadaro.
Iyo Torrente Ballester Mubairo inozivikanwa uye inotakura mubairo wemari, asi iwo mubairo wakazvimiririra, Iko hakuna muparidzi kumashure kwazvo, saka kuhwina hakuvimbisi kuti muparidzi achakuburitsa. Uye kwakauya mugumo: pazuva rimwe chetero vakatanga kundidaidza edhiri ivo vaive vaverenga chinyorwa. Nguva yekuverenga ndeye gore rimwe kana anopfuura nekuda kwenhamba zhinji yemabasa avanogashira. Ndakanga ndisingazivi izvozvo! Pakati peavo vakadana aive muparidzi wangu, Maeva, apo zvainge zvisati zvazivikanwa kuti Torrent Ballester yakanga yakunda. Ini ndanga ndavatumira iwo akanyorwa mwedzi yakati wandei yapfuura uye ivo vaifona kuti vandiudze kuti vaifarira kunditsikisa!
Dai zuva randakasarudza kugadzira mamwe emanyoro uye ndichiedza kuatumira kumamwe makwikwi nevabudisi, ivo vakandiudza zvaizoitika uye kuti ndichavepi nhasi, ndingadai ndisina kuzvitenda. Izvo zviri pachena ndezvekuti, muchikamu ichi, haugone kukurumidza. Zvinhu zvinoitika zvishoma nezvishoma uye zvinoenderana nekumanikidza kwakawanda.
Pfungwa yekunyora yaive kupi Izvo vakafa vanonyarara?
Izvo vakafa vanonyarara Izvo zvinobva munyaya dzandakanzwa muhudiki hwangu, pamiromo yevabereki vangu nevamwe vanhu vakuru uye izvo zvakandibata panguva iyoyo. Ini ndinofungidzira kuti senge vangangoita vana vese, chandainyanya kutya kurasikirwa nevabereki vangu, kuti chimwe chinhu chingaitika kwavari, kurasika, kubiwa naBogeyman ... ndaishushikana nazvo.
Pandakanzwa vakuru vachitaura nyaya dzemadzibaba panguva yehondo Vakanga vatumira vana vavo vadiki vari vega kuRussia kana England kuti vagowana hupenyu huri nani pane hwavaigona kuvapa kuSpain, kunyangwe vachiziva kuti vangasazovaonazve, ndakatya. Kana pandakanzwa manani nevapristi vekuchikoro kwangu vachiudza kuti vakagamuchirwa kumonisita kana kuseminari pavakange vaine makore 9 kana gumi nekuti vaive ivo mudiki pane hama zhinji, vadiki kwazvo kuti vashande uye vabereki vavo havana zvakakwana vape chikafu.
Ini pandakanga ndakura ndainzwisisa kuti sarudzo dzevanhu Ivo vanogona chete kukosheswa uye kunzwisiswa nekuziva iwo mamiriro mavanonwa. Uye izvo zvakafuridzira iyo novel.
En Izvo vakafa vanonyarara vanovhengana nyaya mbiri: iko kuunganidzwa, kuri pachena kwekunyepedzera, kwepenjeni yakakura yemukuru weuto reFrancoist kuti, dai ari mupenyu, angave ane makore 112, angadai achangobva kuchinjira kubhengi reinternet uye angadai asina kurapwa nachiremba weveruzhinji kweanopfuura makore makumi matatu. Kana muongorori mukuru, Gracia San Sebastián, atanga kuferefeta nyaya iyi, pane chiitiko chisingatarisirwi: muvakidzani waamai vake, mudzidzisi akarega basa, anozivikanwa munharaunda saLa Impugnada, anozviuraya nekusvetuka nepahwindo repatio, netsamba yakanyorwa nemaoko yakanongedzwa kusiketi yake yakanyorerwa kumuchengeti wechivako.
Iyo inoverengeka yekunyengera, ine zano rakasimba kwazvo, nekubata kwekuseka, asi semune chero rondedzero yehunyengeri kune yemagariro portrait kuseri kwechirongwa. Vhura Izvo vakafa vanonyarara iyo yekumashure ndiyo shanduko yenzanga yeSpain kubva panguva yapashure pehondo kusvika parizvino, vechizvarwa ichocho chakazvarwa muma40s, nekushomeka, pakati peudzvanyiriri, vasina rusununguko kana ruzivo uye avo nhasi vanotaura nevazukuru vavo paSkype, tarisa akateedzana paNetflix uye vasaina makosi emakomputa kune avo vanopfuura makumi matanhatu nemashanu.
Chokwadi icho chinoongororwa munoverengera mhedzisiro sarudzo dzakatorwa makore makumi mashanu apfuura uye zvichave zvakakosha kuti unzwisise mamiriro ezvinhu epanguva ino kuti aratidze zviri kuitika mune ino nguva.
Ndiani protagonist wako, Gracia San Sebastián, uye ko iwe iwe maari?
Hmunguva pfupi yapfuura ndakanzwa Rosa Montero achiti vanyori vanonyora kutarisana nekutya kwedu, kuzvidzora kwedu, kuti tizvitaurire isu nyaya dzevatambi vanotarisana nekutya kwedu, kuti tizvideredze uye tibvise pazviri. Handizive kana chinhu chimwe chete chichaitika kune vese vanyori, asi kwandiri, ini ndinozviratidza zvizere.
Nyasha igamba rangu chairo, rakatarisana nekutya kwangu kukuru. Iye nemurume wake vanotambura kuti vakunde njodzi inokatyamadza upenyu, kufirwa nemwanakomana wavo wemakore matatu mutsaona yemumba.
Nyasha ane hunhu hwake hunokura pamwe nemanoveli, inozvishandura yega pasina ini, kunyangwe zvakadii munyori, achidzora nzira yayo yekukura. Ane zviitiko zvakasiyana nezvangu, izvo zviri kuumba hunhu hwake.
Ehezve, ini handina kukwanisa kuramba kuzvipa nezvimwe zvandaifarira nezvandinoita: semuenzaniso, hapana mumwe wedu akatarisa nhau kwenguva yakareba kana kuverenga nhau. Zvakare paviri tinoda chikafu chakanaka newaini tsvuku.
Uye neazvino mhirizhonga yeakanaka echikadzi protagonists, mune chii chingave chinonyanya kumira kupfuura izvo?
Chii chakakosha nezvaGrace ndechekuti iye munhuwo zvake. Akangwara uye murwi, murwi, sevamwe vakadzi vakawanda. Iye anoshamisa, semutambi mukuru wenyonganiso, kuti haasi iye muongorori, asi inyanzvi mukubiridzira kwemari.
Nyasha akagara mumusoro mangu kubva pahudiki hwangu ndisingazvizive. Semwana mudiki ndaifarira kuverenga uye nekukasika ndakabatwa nezano renyonganiso, ndakaenda kubva kuMortadelos Agatha Christie uye kubva ipapo kuenda kune zvaive panguva iyoyo: kubva Sherlock Holmes kuna Pepe Carvalho, kuburikidza naPhillip Marlowe, Perry Mason. Ini ndaive ndakatarisira mberi kune chitsauko chimwe nechimwe chakateerana Mike Nyundo paterevhizheni.
Neniwo ndakazoona zvinhu zviviri: kuti ivo protagonists venhau dzandaifarira vaive varume, uyezve vese vaive nechimwe chinhu chakafanana: vaive vasina moyo nehupenyu, vasina hukama hwehukama kana hukama hwemhuri, vainwa whiskey nenguva dzagumi mangwanani uye vairara muhofisi nekuti hapana aive akavamirira kumba. Zvino vakadzi vaongorori vakatanga kubuda, asi ivo vakateedzera iwo maitiro evarume vakavatangira: mukuru Petra Delicate naAlicia Jimenez - Barlett kana Kinsey milhone rakanyorwa naSue Grafton.
Ikoko, ndisingazive, ndakafunga kuti rimwe zuva ndinonyora nezve muongorori kuti aive mukadzi uye kuti aive nehukama hwepedyo newemhuri. Kunyangwe komisheni yemapurisa iyo inoperekedza Gracia San Sebastián mumatambudziko avo, Rafa Miralles, murume chaiye: Iye ane hunyanzvi pakamba yemapurisa, asi anofara akaroora, baba vevasikana vaviri, vanofarira kubika, vane shamwari dzakanaka uye imbwa inotamba.
Ndeapi vanyori vaunoyemura? Pane chero mumwe munhu kunyanya akakufurira iwe yenyaya iyi? Kana pamwe kuverenga kwakakosha?
Ndakatanga kunyora na Agatha Christie. Unganidzo yese yaive mumba mangu. Ndichiri nazvo zvese, mune hurombo mamiriro kubva kuhuwandu hwenguva dzandinoverenga nekudzidzokorora. Nhasi ndinoita zvimwe chete nemabhuku eiyo nyowani mukadzi mukuru wetsiva, Donna Leon, naiye Brunetti muVenice.
Pakati pevanyori veSpanish ini ndinayo sekureva Jose Maria Guelbenzu, uye ndinoda bhuku rega rega idzva ne María Oruña, Reyes Calderón, Berna González Harbour, Alicia Jiménez Barlett kana Víctor del Arbol. Zvakare zvimwe zvakazvitsikisa-zvine kwandiri zvakanyatsovimbika saRoberto Martínez Guzmán. Uye zvitsva zviviri zvitsva gore rino: Santiago Díaz Cortés naInés Plana. Ndiri kutarisira kuverenga zvinyorwa zvako zvechipiri.
¿Izvo vakafa vanonyarara Iko kutanga kwesaga here kana kuti unoronga kushandura rejista mune yako inotevera novel?
Iyo saga Inoenderera mberi protagonist uye mavara anomukomberedza: komisheni Rafa Miralles, Sarah, shamwari yako yemishonga, nyanzvi, mudzimai wekomishinari uye Barbara, hanzvadzi yake, cardiologist, asingashiviriri uye anoita zvakakwana. Iyo nyowani kesi munhoroondo yechipiri ichave yakasiyana zvakanyanya kubva kune yekutanga Uye, kana vaverengi vachida, ndinovimba kune zvakawanda zvimwe.
Maitiro ako ekusika kazhinji sei? Wakave uine chero zano kana nhungamiro? Unoikurudzira here?
Sokufunga kwangu: nyonganyonga. Handisati ndambotambura neakavharwa peji peji. Ndiri kungoda nguva nekunyarara. Maawa akati wandei ekunyarara, pasina ruzha kana kukanganisa uye nyaya inoyerera. Handimbozive zvandichanyora, kana chii chichaitika munoverengeka. Maitiro anonakidza kwazvo nekuti ini ndinonyora nemanzwiro emuverengi uyo asingazive zvichaitika mune inotevera chiitiko. Kana ndapedza kunouya chikamu chakakomba: gadzirisa, gadzirisa, gadzirisa.
Ehe ndinotsvaga rairo: Ndakadzidza paChikoro cheVanyori ne Laura Moreno, izvo zvinondibatsira kugadzirisa zvinyorwa zvangu, ipapo ndakatanga chirongwa che chekupa mazano zvinyorwa naJose María Guelbenzu, uyo aitova mumwe wevanyori vandinoda uye kubva kwandisina kumbomira kudzidza, ndine kirabhu yangu ye vatengesi, ... Basa rekunyora rakasurukirwa, saka kuva nevanhu vane ruzivo kuti vakudzidzise zvaunogona uye zvausingakwanise uye vaverengi kuti vakupe maonero avo pamhedzisiro mhedzisiro kwandiri yave uye iri pfuma. Ini ndinonamatira kwavari, ivo mutungamiri wangu uye chirevo changu.
Ndeapi mamwe mavara emhando yaunoda?
Kunyangwe ini ndichifarira zvivimbo, ndinogona kukochekerwa pane chero runyorwa rwe chero mhando iri. Kusvikira gore rapfuura ndingadai ndakakuudza kuti nhoroondo yenhoroondo yaidzipwa zvishoma, asi gore rino ndakaverenga maviri akandikunda: yekutanga Iyo Angle yeMist, kubva kune mumwe wangu Fatima Martin. Gare gare, ndakave nerombo rakanaka kuti ndive chikamu chejuri re Carmen Martín Gaite Mubairo uye kubvira pandakaverenga basa ra Paco Tejedo Torrent Nebhuku rakafungidzirwa pamusoro paMaría de Zayas y Sotomayor, ndaiziva kuti ndaifanira kukunda. Neraki, mamwe majuri akabvumirana. Zvakare Ini ndaive mutongi muTorrente Ballester uye ini ndakada ruzha runokunda, IArgentina inoda Mwari, iri bhuku rekufamba, re Lola shultz, inoshamisa. Pane kudaro, irwo rudzi rwandinowanzo verenga.
Ndinofungidzira mune zvese Ini ndinoda nyaya dzakanaka dzinondisungirira uye dzinoita kuti ndide kuziva zvakawanda, chero mhando iri.
Ini ndinotobvuma izvozvo pane manoveli andinoverenga nekuverenga zvekare nguva dzese kazhinji ivo havazi evaraidzo enganonyorwa, senge Munhu haararame pane caviar chete, de Johannes M Simmel, bhuku rekare kwazvo rave riineni kubva pazera rekuyaruka, Hapana chinoshora husiku naDolphine de Vigan, iyo yandaiwanzoverenga muzhizha. OLMubiki waHimmler, de Franzt Olivier Giesbert, kuti ndinogona kuverenga chiuru uye zvinogara zvichindishamisa.
Mashoko mashoma kune vanyori vekutanga?
Regai vanyore zvavanoda kuverenga, nekuti nenzira iyoyo ivo vachatenda mune ravo basa uye ivo vanozoziva kuti vasati vapedza ivo vatova neye yavo yekutanga isina mamiriro. Zvakare izvo zvavanogadzira, kuti ivo vadzidze yehunyanzvi chikamu chekunyora kubva kune vane ruzivo vanyori, kuti ivo vanogadzirisa, kuti ivo vanotsvaga yakanaka nyanzvi yekugadzirisa kupedzisa kupora nyaya yako.
Uye pakupedzisira usanyara kutumira yako novel kunzvimbo dzese kwazvinogamuchirwa. Nokushivirira kwakawanda, pasina kukurumidza, asi pasina kurasikirwa nemikana: kana ukaratidza basa rako, hauna vimbiso, asi une mukana uye hauzive kwaungagumira.
Uye pakupedzisira, ndeapi mapurojekiti aunazvo iwe kana ese maelstrom ekuratidzira nemasaini apfuura?
Tora mazuva mashoma kuti utende vanhu vese vakasarudza ino novel uye kuti pakati pemaelstrom zvinogona kunge zvakaitika kwandiri kuti ndizviite panguva ino. Uyezve gara pasi zvakare kunyora uye kushandisa nguva yemahara nemhuri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Ana Lena Rivera. Kubvunzana nemunyori weZvinonzi vakafa vakanyarara
Nei bhuku repepa richiramba richirova iro bhuku redhijitari nekukoromora?